दशैँमा के खाने, के नखाने ? – onlineyuba
२०७७ कार्तिक ८, शनिबार १६:०७
घटस्थापना गरेसँगै मांसहारीहरुले दशैँको अष्टमीमा खसी बोका, हाँस, रागाको बलि दिने गरेका छन् । यससँगै दशैँमा मासुका परिवारहरु भान्सामा धेरै पाक्ने गरेका छन् ।
शाकाहारीले पनि दशैँमा विभिन्न तरकारीका परिकारका साथै मिठाइको परिकार खाने गरेका छन् । मिठाइको परिकार धेरै खाँदा यसले पनि फाइदा पुग्दैन त्यसैले दशैँमा खानपानमा विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
डा अनिलका अनुसार मुटुका बिरामी र उच्च रक्तचाप भएका बिरामीले दशैँमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने हो भने मासुको परिकार, चिल्लो, नूनमा नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।
त्यस्तै दशैँमा मदिरा धेरै सेवन गर्दा कलेजोमा असर पर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन जरुरी छ । विशेषगरी कलेजो मदिरा र बोसोयुक्त तथा चिल्लो खानाले विग्रन सम्भावना हुन्छ ।
चाडपर्वको नाममा मासु धेरै खाने चलन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । मोटो शरीर, रगतमा कोलेस्ट्रोल बढी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, युरिक एसिड तथा मधुमेह भएका व्यक्तिले सकभर मासु नखानु नै राम्रो हुन्छ । शरीरलाई पच्ने गरी खाना खानुपर्ने पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् ।
डा. उप्रेतीका अनुसार चिल्लो हालेको खाने कुरा कमभन्दा कम खानुपर्छ । धेरै मसला हालेको खानेकुरा खाँदा विशेषतः मुटुरोगी, युरिक एसिड भएका बिरामीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
दशैँमा मादक पदार्थ सेवन सकेसम्म नगर्न डा. उप्रेतीको सुझाव छ । ‘दशैँ स्वभावैले खानपानसँग जोडिएको पर्व हो,’ उनी भन्छिन् , ‘दीर्घरोगीले यो पर्वमा अलि बढी ध्यान दिन जरुरी छ र स्वस्थ मानिसले पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै मसलेदार, चिल्लो तथा पिरो खानेकुरा खाँदा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ, नभए पछि यसले समस्या निम्त्यान सक्छ।’